YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, September 02
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/02/2008 1 အကြံပြုခြင်း
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ လက်မခံ နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေးနည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံး၍ ဆန့်ကျင်မည်
ပီတာအောင်/ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
၂၀၀၈ ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်သည် ဥပဒေအထက်တွင် ရှိနေပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၌ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝလက်မခံကြောင်း တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများကောင်စီ (အီးအန်စီ) က ကြေညာသည်။
သြဂုတ် (၂၆) မှ (၂၈) ရက်ထိ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာ၌ ကျင်းပသည့် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများညီလာခံအပြီး အီးအန်စီက ထိုသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်လာစေရန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံး၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အီးအန်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသစ် ဒူဝါမခေါ် ခွန်ဆာက ပြောကြားသည်။
၎င်းက “နည်းလမ်းပေါင်းစုံဆိုတာ ပြည်တွင်းက လူထုအားနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် တဖက်က ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ထိုနည်းတူစွာနဲ့ပဲ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ဖို့ဟာကတော့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတခုတည်းနဲ့လည်း မရသလို၊ စစ်ရေးနည်းလမ်း တခုတည်းနဲ့လည်း မရနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးရော၊ စစ်ရေးရော အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနိုင်မှ သာလျှင် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်မှာ” ဟု ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် နအဖစစ်အစိုးရကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင် တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီများအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် အဖွဲ့များကလည်း ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒမှန်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းကြရန် အီးအန်စီက တိုက်တွန်းသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးပွဲ နအဖက စီစဉ် ပေးရန်၊ မြန်မာပြည်သူတို့ ဆန္ဒမှန်ဖော်ထုတ်ခွင့်ရရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ နှင့် နိုင်ငံတကာက ပံ့ပိုးကူညီရန်နှင့် ကုလ သမဂ္ဂကြီးကြပ်မှုဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ပါဝင်သော Multi Party Talk နိုင်ငံစုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန်တို့ကိုလည်း အီးအန်စီက တောင်းဆိုသည်။
အီးအန်စီအဖွဲ့သည် ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင် စသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် (၇) ခုကို အခြေခံ၍ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုဖြစ်သည်။ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ညီလာခံ၌ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ် (၅၀) ကျော်တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/02/20080အကြံပြုခြင်း
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ထောက်ခံသည့်အဖွဲ့များ အင်္ဂါနေ့မှာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ထိုင်းတနိုင်ငံလုံး အထွေထွေ သပိတ်ဖြစ်ဖို့ နှိုးဆော်ပြီ
Bangkok Post/Nations/Agencies/ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအတွင်း၌ စခန်းဖွင့်၍ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသော ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပီအေဒီ) နှင့် အစိုးရကို လိုလားသည့် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ထိုင်းညီညွတ်ရေးတပ်ဦး (ယူဒီဒီ) တို့ အကြား ယနေ့နံက်အစောပိုင်းတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားသဖြင့် လူ (၁) ဦးသေဆုံးပြီး (၄၄) ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာနကပြောသည်။
ဒဏ်ရာရသူ (၄၄) ဦးမှ (၁၂) ဦးသည် ဘန်ကောက်ရှိ Vajira ၊ Ramathibodi ၊ Hua Chiew ၊ Siriraj ၊ Mission ၊ Rajavithi စသည့် ဆေးရုံ (၆) ခုတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာန ဒု-ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ပီယာဖွန်း ဆိုင်ချူးရားကပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူသည် ဦးခေါင်းတွင် မာကျောသည့်ပစ္စည်းဖြင့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒေါက်တာ ပီယာဖွန်းကပြောသည်။ သို့သော်သေဆုံးသွားသူအား ဆေးကုသပေးခဲ့သည့် ဖွန်းဖက်အရေးပေါ် စင်တာကမူ ၀မ်းဗိုက်သို့ သေနတ်ထိမှန်၍ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပီအေဒီအဖွဲ့ဝင်များသည် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ ဆင်းပေးရန်တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေသည်မှာ လနှင့်ချီ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ယခင်လ (၂၆) ရက်မှစ၍ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်းအတွင်း ၀င်ရောက်စခန်းချနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းတနိုင်ငံလုံး အထွေထွေ သပိတ်ဖြစ်ဖို့ နှိုးဆော်ပြီ
ပီအေဒီအဖွဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားသူများက ထိန်းချုပ်ထားသည့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၄၃) ခုမှ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများက အစိုးရဖြုတ်ချရေး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့် ရေထောက်ပံ့ရေးကို နေရာရွေးချယ် ဖြတ်တောက်ရေး၊ ဘန်ကောက်လိုင်းကားများ ရပ်တန့်သွားစေရေးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများ နှောင့်နှေးသွားစေရေးတို့ကို မနက်ဖြန်မှ စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ရေနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပြည်နယ်ရဲဌာနရုံးများသို့ ဦးစွာပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာနများနှင့် ၀န်ကြီးများ၏ အိမ်များသို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် ဖုန်းလိုင်းများကိုလည်း ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် ပီအေဒီအမာခံခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ စ၀စ်ကရောက်ဝန်ကပြောသည်။
၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်ကြောင့် နိုင်ငံတ၀န်းပြေးဆွဲနေသော ထိုင်းနိုင်ငံတကာလေကြောင်းပိုင် လေယာဉ်များကြန့်ကြာသွား မည်ဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့တွင်း လိုင်းကားအစီးရေ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းလည်း ပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးမီက ရပ်တန့်ခဲ့သော မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရထားခရီးစဉ်များမှာမူ ယမန်နေ့က ပြန်လည် ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပါတီကို ဖျက်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အကြံပြု
လက်ရှ်ိအာဏာရ ပြည်သူ့စွမ်းအားပါတီ (ပီပီပီ) အနေနှင့်် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ယွန်ယု ထိယာဖိုင်ရတ်၏ ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဝယ်ခဲ့မှုတွင် တာဝန်ရှိသဖြင့် ပါတီဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ယနေ့အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
အကြံပြုတိုက်တွန်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ချမှတ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်အထွေထွေတွင်းရေးမှူး ဆူထစ်ပိုး ထာဝီချိုင်ခန်းကပြောသည်။
အဆိုပါအမှုကို တရားသူကြီးချုပ်ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ ရက် (၃၀) အတွင်း ထပ်မံလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
အကယ်၍ တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ယူဆချက် မတိုက်ဆိုင်ပါက ၎င်းတို့ဌာနနှစ်ခုအကြား ပူးတွဲကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်း၍ အမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပီပီပီ ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဟောင်း ယွန်ယု ထိယာဖိုင်ရတ်သည် ယခင်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲဝယ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရ သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတရားရုံးက ၎င်းအား လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်မှ ယခုနှစ် ဇူလိုင်လဆန်း၌ ပယ်ချလိုက်ပြီးနောက် ပီပီပီ ပါတီဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စတင်စဉ်းစားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာ
Bangkok Post/Nations/Agencies ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
အစိုးရကို ထောက်ခံသူများနှင့် အစိုးရအတိုက်အခံများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး လူတဦးသေဆုံး၍
(၄၄) ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမတ်ဆန်ဒါရာဝပ်မှ အင်္ဂါနေ့တွင်
ညတွင်းချင်း အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ကြေညာလိုက်သည်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် စစ်တပ်သည် ရဲအာဏာအပြည့်အ၀ ရရှိပြီးနောက် အခင်းဖြစ်ပွားရာ
လုံခြုံရေးအတွက် စစ်တပ်မှ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် အနုပေါင် ပေါင်ဂျင်ဒါမှ ကြီးကြပ် တာဝန်ယူရသည်။
မနက် (၇) နာရီတွင် အစိုးရပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အသံလွှင့်ရုံများက အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက်ကို လွှင့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းအစိုးရက အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသော်လည်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအား သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး စီးနင်းထားသည့် ပီအေဒီ ဆန္ဒပြသူများမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးမှ ဖယ်မပေးသည့်အပြင် ယနေ့ အင်အားထပ်မံ တိုးချဲ့ထားသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေ အမိန့်မှ ဆိုထားသည်မှာ “လူထု လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်” မည့် သတင်းအစီရင်ခံချက်များအပေါ် စိစစ်ကန့်သတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေ အမိန့်အရ အထူးသဖြင့် တားမြစ်ထားသည်မှာ ဆန္ဒပြလိုမှုအတွက် လူငါးဦးထက်ပိုပြီး မစုစည်း ရေးဖြစ်သည်။ (PAD) ဆန္ဒပြအဖွဲ့ဝင်များအား အင်အားသုံး လူစုခွဲရာတွင် (သို့မဟုတ်) ဖမ်းဆီးရာတွင် အရေးပေါ် အခြေအနေ အမိန့်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြည်သူလူထုအား ဆန္ဒပြကြရန် မီဒီယာများမှ နှိုးဆော်ချက်များကို ဆင်ဆာ ဖြတ်နိုင်သည်။
အစိုးရထောက်ခံသည့် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ညီညွတ်ရေးတပ်ဦး (UDD) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများက ဆနမ်းလွန်တွင် စုရုံးနေသော ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒပြမှုကို အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ချက်ချင်းကြေညာသည်။
ထိုကြေညာချက်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်း ထိုင်းစစ်အစိုးရ နေ၀င်မီးငြိမ်းကာလပိုင်းတွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် အငြင်းပွားဖွယ် အရေးပေါ်ဥပဒေသစ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်အခြေအနေကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေညာထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေသည် ရက်အနည်းငယ်ထက်ပိုပြီး ကြာမြင့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စမတ်က ပြောသည်။
“အခြေအနေကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ ကျနော် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု စမတ်ကရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုတွင် ပြောကြားသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တွင် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြင်မထွက်ရအမိန့်ကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းမည်မဟုတ်ကြောင်း စမတ်က အခိုင်အမာဆိုသည်။
သို့ရာတွင် PAD ဆန္ဒပြအဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝင်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာပေးမည်ဟု မျှော်လင့်သည်ဆိုသည့် အချက်ကို သိသိသာသာပြောသည်။ “အခု လုပ်ခဲ့တာမျိုး ဘယ်သူမှ လုပ်ခွင့်မရှိဘူး” ဟု နိုင်ငံတလွှားလွှင့်ထုတ်သည့် ရုပ်သံလွှင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မီဒီယာများကို စမတ်က ပြောသည်။
အရေးပေါ် လုံခြုံရေးအကြီးအကဲလည်းဖြစ် စစ်တပ်အကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည့် အနုပေါင် ပေါင်ဂျင်ဒါသည် “သတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့်နေရာကိုမဆို သွားရောက်သူများအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ခွင့်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှိနေသည့်သူများကို ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခွင့်” ရှိကြောင်းလည်း ပြောသည်။
ဘန်ကောက်ရှိ စာသင်ကျောင်းများကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့များတွင် ပိတ်ရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ (ကျောင်းများ ပိတ်ထားလိုက်ခြင်းသည် ဆန္ဒပြနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒပြသူများအား သတိပေးသည့် သင်္ကေတ ဖြစ်နိုင်သလို ရပ်ဆိုင်းခြင်းမရှိပါက ဖယ်ရှားခံရဖွယ်ရာရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည့် သင်္ကေတလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။)
အင်္ဂါနေ့မနက် အစောပိုင်းတွင် အစိုးရကို ထောက်ခံသူများ (UDD) နှင့် အစိုးရအတိုက်အခံများ (PAD) ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြင်းဖြစ်ပွားရာကို ရှာဖွေရန်အတွက် အချက်အလက်ရှာဖွေရေး ကော်မတီတရပ် ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း စမတ်က ပြောသည်။
အစိုးရကို ထောက်ခံသူများ (UDD) စုရုံးခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် အစိုးရ ရှိနေသည် ဆိုသည့်အချက်ကိုတော့ စမတ်က ငြင်းဆန်ထားသည်။
ဆမတ်ရဲ့ လက်ရှိအာဏာရပါတီကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တောင်းဆို
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေအကြား အကြမ်း
ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်အာရှနိုင်ငံတွေက ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွား
မယ်ဆိုရင် သတိထားဖို့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို သတိပေးနေကြပါတယ်။ ထိုင်း
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကလည်း ၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆွန်ထရာဝေး (Samak
Sundaravej) ရဲ့ လက်ရှိအာဏာရပါတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်မှု
တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဖျက်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံး
အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုသိန်းထိုက်ဦးက စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ထိုင်းအစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေအကြား အင်္ဂါနေ့မနက် စောစောပိုင်း
က ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လူ ၄၀ ၀န်းကျင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့
ပြီးနောက် အစိုးရက နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို
အကြမ်းဖက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြား ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်း လုံခြုံရေးအတွက် အကူ
အညီပေးဖို့ တပ်ခွဲ ၄ ခု၊ စစ်သား ၄၀၀ လောက်ကို ဘန်ကောက်မြို့ကို အကူအညီပေးဖို့
စေလွှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်အနေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အင်အားသုံး
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နှိမ်နင်းတာတွေ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အနုပွန် ပေါင်ချင်ဒါ (Anupong Paochinda) က ပြောဆိုပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းအထိတော့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သူတွေက အစိုးရရုံးဝန်း
အတွင်းကို သိမ်းထားပြီး လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေ၊ ဆေးရုံလူနာတင်ကားတွေ လှည့်လည်သွား
လာနေတဲ့ကြားမှာပဲ မိန့်ခွန်းပြောသူပြော၊ သီချင်းတွေဖွင့်ပြီး အခြေအနေတွေဟာ
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အခုတော့ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေ
အနေ ကြေညာထားသလို ထိုင်းအစိုးရက လူ ၅ ယောက်ထက် မစုဝေးရဆိုပြီး အမိန့်
ထုတ်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်း
ရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ သတင်းပေးပို့တာတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုပြီး တားမြစ်ကန့်သတ်ထား
ဒီလို နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိနေတဲ့အချိန်
၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ်ရဲ့ အစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ
မဲလိမ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ရာထူးက
နုတ်ထွက်ပေးဖို့ နောက်ထပ်ဖိအားပေးမှုတခုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အစိုးရရုံးတွေကို သိမ်းထားတဲ့ သပိတ်တွေမှာ နိုင်ငံတ၀န်းက
ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ ရှိလာနေပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၄၃ ခုက အလုပ်
သမား ၂၀,၀၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကလည်း ဒီသပိတ်မှာ
ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ နုတ်ထွက်မပေးဘူးဆိုရင် အစိုးရရုံးတွေကို
ရေ၊ မီးနဲ့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ ဖြတ်တောက်ပစ်မယ်ဆိုပြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက
ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီးရထားလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းတွေ သပိတ်မှာ ပါဝင်လာခဲ့
တဲ့အတွက် ဘန်ကောက်နဲ့ တခြားမြို့တွေကို ဆက်သွယ်တဲ့ ကုန်တင်ရထားတွေ
တော်တော်များများ မထွက်နိုင်ဘဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေက အစိုးရအနေနဲ့ နုတ်ထွက်မပေးဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် လေဆိပ်တွေကို
ပိတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ ပယ်ဖျက်ရအောင်လုပ်မယ်လို့
ခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ စောစောပိုင်းတုန်းကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အသွား
များတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖူးခက်လေဆိပ် အပါအ၀င် လေဆိပ် ၃ ခုကို ဆန္ဒပြသူတွေ
၀င်သိမ်းခဲ့တာကြောင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ အခု ဒီလေဆိပ်တွေ
ပြန်ဖွင့်ပြီး ခရီးစဉ်တွေ ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေ
က ဒါဟာ သဘောလောက်ပဲလုပ်တာဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။
တချို့ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့ ထိုင်းအစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ကန့်ကွက်သူ
တွေအကြား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေက ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လူတန်းစားပဋိပက္ခကို
မီးမောင်းထိုးပြနေတယ်ဆိုပြီး သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လူလတ်
တန်းစားတွေနဲ့ အောက်ခြေ နိစ္စဓူဝ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအကြား အစိုးရအပေါ်
ထောက်ခံမှု သဘောထားကွဲလွဲတာက အခုလို ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးတင်းမာ
မှုတွေ ပိုပြီးကြီးထွားတာဆိုပြီး သုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်
တွေကလည်း နိုင်ငံရေးအခြေအနေ မသေချာမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ထပ်ပြီး
ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်ထွက်ခွာနေကြပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆွန်ထရာဝေးကတော့ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေအနေ
ကြေညာပြီးနောက်မှာ အစိုးရရုံးတွေကို သိမ်းထားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို နေရာက
ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် ထိုင်း ကြည်းတပ်စစ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေး
ကော်မတီကနေ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်း
မိုးသူ နှင့် ထက်ဝင်း
အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 02 2008 19:16 - မြန်မာစံတော်ချိန်
“ကျနော်တို့ ဓါတ်မြေသြဇာ စက်ရုံတွေသာ ဆောက်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းသုံးအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ပိုလျှံတဲ့ မြေသြဇာတွေကိုလည်း ပြည်ပကို တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ပညာရှင်တဦးက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ချမှတ်ထားသော သွင်းကုန် အစားထိုးရေး မူဝါဒနှင့်လည်း ကိုက်ညီပြီး ဤပေါ်လစီကို စစ်အစိုးရက သူတို့၏ မတည်ငြိမ်သော စီးပွါးရေး မူဝါဒများတွင် မကုန်မခမ်းနိုင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
“စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၏ အရေးပါမှုနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုတို့ကို ကြည့်၍ ဤကဏ္ဍကို ခိုင်မာအောင် လုပ်ခြင်းသည် အဓိက ရည်မှန်းချက်တရပ် ဖြစ်သင့်သည်” ဟု အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကဲ့သို့သော သယံဇာတမှာ ကုန်ခမ်းသွားနိုင်သော အရင်းအမြစ်တခု ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေနဲ့ ရံပုံငွေတရပ် ထူထောင်ထားရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးနဲ့ ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ကောင်းမှာဘဲ” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် စီးပွါးရေး ပညာရှင်တဦးက ပြောသွားပါသည်။
တိုင်းပြည်အပေါ် စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ဘယ်လိုပင်ရှိနေနေ “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်လာခြင်းအတွက် အရေးပါလှသော စီးပွါးရေး ဝန်းကျင်ကောင်း တရပ်” ကို မဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် အစိုးရသာ ပထမဆုံး တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်သည်ဟု တုံးတိတိပင် ပြောဆိုထားပါသည်။
ထိုင်း ဆန္ဒပြပွဲသတင်း မြန်မာမီဒီယာများတွင် ရေးသားခွင့်မရ
ကိုစိုး | စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော လက်ရှိထိုင်းအစိုးရကို မကျေနပ်၍ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများနှင့် အစိုးရ လိုလားသူများအကြား ပဋိပက္ခသတင်းများအား မြန်မာပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခွင့်မရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခသတင်းကို ပုံနှိပ်မီဒီယာများအပြင် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းများတွင်ပါ မတွေ့ရှိရ ကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် ၀ါရင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီ ကိစ္စ ဆင်ဆာလုပ်ထားတယ်၊ အပြင်ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း မရေးရဘူး၊ အစိုးရ သတင်းစာမှာလည်း မရေးဘူး၊ စီအန်အန် တို့ အပါအ၀င် ပိုက်ဆံပေးကြည့်ရတဲ့ စလောင်း ချင်နယ် လေး ငါး ခု ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာလည်း ဆင်ဆာ လုပ်ထား တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ ရေဒီယိုတွေရော၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေမှာရော မတွေ့ဘူး”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
စီအန်အန် လိုင်းသည် စစ်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုထားသော Family entertainment,Five Movies အစီစဉ်မှ တဆင့် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သည့် လိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဆင်ဆာ ပြုလုပ်၍ ရသည်ဟု လည်း သိရသည်။
ယခုရက်ပိုင်းနှင့် လွန်ခဲ့သည့် အပတ်က ထုတ်ဝေသော သတင်းဂျာနယ်များတွင် ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ၂ နိုင်ငံ အငြင်းပွား နေသည့် ဘုရားကျောင်း ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သော သတင်းကိုသာ တွေ့ရှိရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခ သတင်း ဖော်ပြသည်ကို မတွေ့ရှိရကြောင်း ဂျာနယ် သတင်းထောက် တဦးကလည်း ပြောပြသည်။
“လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဂုစတဗ် ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းသတင်းတော့ ပါတာ တွေ့တယ်၊ မနေ့က အထိထုတ်တဲ့ ဂျာနယ် တွေမှာလည်း ထိုင်း နိုင်ငံရေး သတင်း မပါဘူး၊ ဒီလို နိုင်ငံတကာ သတင်းမျိုးက ၀ိကလီး အလဲဗင်းတို့ ၊ ဖလားဝါး နယူးစ် တို့လို ဂျာနယ်တွေမှာကို ပါတတ်တာ အခုမပါဘူး”ဟု အထက်ပါ သတင်းထောက် က ပြော သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခသတင်းကို စစ်အစိုးရတားမြစ်ထားသည့် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ(DVB) ဂြိုဟ်တု စလောင်းများမှ တဆင့်သာ ကြည့်ရှုကြရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
“နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဂြိုဟ်တုစလောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာကတင်းကျပ် ထား တယ်၊ အဲဒီ ချင်နယ်တွေပါတာ မရောင်းဖို့၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ကြတယ်”ဟု လည်း ဂျာနယ် သတင်းထောက်က ဆက်ပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အင်္ဂါနေ့ နံနက်စောစောပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ၁ ဦး သေဆုံး၍ ၄၃ ဦး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန် စွာရရှိသည့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု နောက်ပိုင်း လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမတ်ခ် ဆွန်ထော်ရ၀ဲ့ က လူ ၅ ဦး ထက် ပိုမစုရ အမိန့် အပါ အ၀င် အရေးပေါ်ကာလ ကြေညာချက် ကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုသို့ အရေးပေါ်ကာလ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ် စမတ်ခ် အစိုးရ ပြုတ်ကျရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း PAD အဖွဲ့က ပြောကြားသည်ဟု ထိုင်းသတင်းဌာန (TNA) အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ယနေ့ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းလတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော ထိုင်းနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကိုဆန့်ကျင်သည့် ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့(People’s Alliance for Democracy-PAD)နှင့် သက်ဆင်ကိုလိုလားသည့် ၀န်ကြီးချုပ် စမတ်ခ်၏ ပြည်သူ့စွမ်းအားပါတီ (People Power Party – PPP)တို့ အကြား ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် မေလကုန်ပိုင်းမှ စတင်ဖြစ်ပွားလာရာ သြဂုတ်လအတွင်း၌ အရှိမြင့်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က“ထိုင်း နိုင်ငံမှာ အစိုးရ အပါအ၀င် စစ်တပ်နဲ့ ဘုရင်ကပါ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံတွေကို လေးစားကြတာတွေ့ရတယ်၊ သူတို့ ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့လည်းအလေး အနက်ရှိကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲဒီလို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်၊ အိပ်မက် တခုလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သည် မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာသော ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဝင်ပါက ပိုမိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြောဆို ခဲ့ကာ ယခင်ကလည်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ တဦးဖြစ်သည် ဟူသော ပြောဆိုမှုများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အလေးထားသူများအပါအ၀င် မြန်မာအတိုက်အခံများက ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သေးသည်။
အဆိုပါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို မကျေနပ်သူများက နုတ်ထွက်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှလည်း ၎င်းအနေနှင့် လွှတ်တော်မှ တောင်းဆိုမှသာ နုတ်ထွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်းများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအရ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း သိရှိသောအကြောင်း အရာဖြစ်၍ မြန်မာပြည်သူ များ သိရှိသင့်သည်ဟု ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားကြီးနှင့် သံအမတ်ကြီးဟောင်း သခင်ချန်ထွန်းကပြောသည်။
“ဒီလိုသာ အမှန်တကယ် မီဒီယာ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဖော်ပြခွင့် မပေးဘူးဆိုရင် ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်”ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ဆိုသည်။
ဒေါ်စု အရေးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဇူလှိုင် ၁၉ ရက်နေ့ က မနက် ၄ နာရီ လင်းအားကြီးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစာတန်းကြီးတစောင်ကိုရေးပြီး အိမ်မှာ ဆင်းကပ်ပါတယ်။ စာတန်းက - အာဇာနည်ကြီးတို့ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်စောင်ရွက်မည်ဟု စာတန်းကြီးကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ အစောင့်စစ်သားများလည်း ရှုပ်ရုပ်သဲသဲဖြစ် သွားပါတယ်။အထက်ကို သတင်းပို့ ကြပါတယ်။
ကုလသမဂ လူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ကသားနား ပြန်ပြီး မကြာခင်မှာရှေ့ နေဦးကြည်ဝင်းနဲ့ ပထမအကြိမ်တွေ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒေါ်စုက ရှေ့ နေဦးကြည်ဝင်းကိုသူကိုချုပ်ထားတာ ၅ နစ်ကျော်သွားပြီ။ ဒီလိုလုပ်လို့ ရလားလို့ မေးတယ်။ ဦးကြည်ဝင်း က ကျနော် မသေချာဘူး။ စီရင်ထုံးတွေကို ပြန်ဖတ်ပါရစေလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒေါ်စုက ကောင်းပါပြီ။ နောက်တခါတွေ့ ရင် ပြောပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်စု ကရှေ့ နေနဲ့ မတွေ့ ရပါ။
ထမင်းပို့ သူ ကိုမြင့်စိုး မှတဆင့်ရှေ့ နေကိုခေါ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ မှသာ ရှေ့ နေဦးကြည်ဝင်း ကို နအဖ က တွေ့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုအိမ်မှာ သစ်ပင်ခြုံနွယ်များထူပြောလာတယ်။ အိမ်ခေါင်းမိုးမိုးယိုမှုများဖြစ်နေပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ က စတင်ပြီးဒေါ်စုက မြင့်စိုးကို ထမင်းလာမပို့ နဲ့ တော့ လို့ ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြင့်စိုးထမင်းပို့ ပေမဲ့ထမင်းကို ဒေါ်စုမှထွက်မယူတော့ပါ။ ယခုဆိုလျင် ၁၀ ရက်ရှိသွားပြီ ဘာအစားသောက်မှမရှိနိင်တော့ ပါ။ စဉ်းစားစရများမှာ ဒေါ်စု အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အပေါ်ဘာကိုတောင်းဆိုနေသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ အတိအကျမသိတော့ပါ။ ကိုမြင့်စိုးမှာ ထမင်းချိုင့်တလုံးဖြင့် နေတိုင်းသွားစောင့်နေသော်လည်း ထွက်ယူခြင်းမရှိတော့ပါ။
ဒေါ်စုကိုဖမ်းထားသူများမှာ နအဖ ဖြစ်ပါတယ်။ Liason Officer - ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ များခန့် ထားသော်လည်း ဘာသတင်းမှ မသိရပါ။ နအဖ မှာ ကြံစည်နေမှုမှာ ဒေါ်စုကို လူဆိုးကြီးပုံသဏန် လုပ်ကြံနေမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဂန်ဘာရီက ဆောက်သုံးမကျမှုကို ကျနော်တို့ အထင်းသားမြင်နိင်ပါတယ်။ ဂန်ဘာရီကိုနောက်ထပ်မြန်မာပြည်မလွတ်ဖို့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်အန္တရယ်တစုံတရာဖြစ်ခဲ့လျင်ကုလသမဂမှာတာဝန်ရှိကြောင်းကျနော်တို့ ထုတ်ဖေါ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
Hello, hello! It's Showtime again.
သြဂုတ်လ- ၂၆ ရက်။
သြဂုတ်လ - ၁၅ ရက်နေ့ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူကိုထမင်းလာပို့ တဲ့သူကို နောက်အပတ်ကစပြီးထမင်းလာမပို့ နဲ့ တော့လို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ အဓိပါယ်ကတော့ သူမဟာ
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲကို စတင်ဆင်နွဲနေပြီလို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။နအဖအစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းတခုမှမရှိသေးပါဘူး။ ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာ ဒေါ်စုအသက်အန္တရယ်ကိုအလွန်ဆိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ ခုထိ နိင်ငံတကာသံတမာန်များနဲ့ သတင်းဌာနများမှဖေါ်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ၊ အ(ဒ်)ဘူလာ ၊ ဂမ်ဘာရီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့(၆)ရက်ကြာခရီးစဉ်ဟာ ၂၃ . ၈ . ၂၀၀၈ (စနေနေ့)မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ။မြန်မာလူထု တစ်ခဲနက်ထောက်ခံအားပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)" နှင့် လက်နက်အားကိုးနဲ့ မတရားအာဏာယူထားတဲ့ စစ်အစိုးရတို့အကြား "နိုင်ငံရေးအရ တင်းမာမှုတွေကို ပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန်" ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တာဝန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ(၆) ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ခရီးစဉ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ၊ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ ယခု နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာတော့ " လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် " နဲ့ မတွေ့ဆုံခဲ့ရပါဘူး ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အတွေ့မခံတဲ့အကြောင်းရင်းကို အခုအချိန်ထိ မည်သူမှ မသိရှိနိုင်သေးပါဘူး ။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (Road Map) ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့လို့ရယ် ၊ မိမိရဲ့ မူလတာဝန်ကနေ သွေဖီပြီး စစ်အစိုးရအလိုကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရယ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထူးခြားတာကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရကလူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ရှေ့ကနေ လော်စပီကာတွေနဲ့ အော်ဟစ်ခေါ်ဆိုနေပုံတွေကို ပြသတာပါဘဲ ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ ...
ထိုင်း ဆန္ဒပြပွဲသတင်း မြန်မာမီဒီယာများတွင် ရေးသားခွ...